ezi zezona zibalaseleyo, kwaye zihlala zomelele ngoku (2021 uhlaziyo)
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ezi zezona zibalaseleyo, kwaye zihlala zomelele ngoku (2021 uhlaziyo)
Iifowuni eziphathwayo-ezake zaba zityibiliki zeplastikhi ngaphandle kokubhenela okubonakalayo- ziye zavela kancinci kule minyaka idlulileyo. Bayasoyikisa ngolwakhiwo lwabo olungena-bezelless kwaye bayakhazimla kuyilo lwabo lweglasi-ngentsimbi. Ubuhle, buza ngexabiso, nangona kunjalo. Ii-smartphones zanamhlanje aziyiyo eyokuhlala ixesha elide, ekusenokwenzeka ukuba kutheni ukwenza iimeko ze-smartphone lushishino lwezigidigidi.
Kodwa ii-smartphones esizichazayo apha ngezantsi zahluke kakhulu. Ezi zixhobo eziphathwayo ezomeleleyo azinakuphumelela ngenkangeleko yazo ekrwada, kodwa ziya kuphelisa nayiphi na yanamhlanje & apos; yefowuni yeflegi ebengezelayo.
Inkangeleko yazo inokuba sesona sizathu sokuba abavelisi abadumileyo baphambuke kude neefowuni ezirhabaxa, kwaye sinee-brand ezimbalwa kuphela ezisabonelela ngezi 'smartphones zobungcali'. Oku kwenza ukuba ukudityaniswa kwethu kube yinto engaqhelekanga. Nazi iifowuni ezingqindilili ezingqonge, ezenzelwe ukumelana nokothuka okukhulu kunye nokumelana nezinto!
Eyona ndlela ibalaseleyo yokuhambisa ii-smartphones, uluhlu olushwankathelwe:
I-Samsung Galaxy XCover Pro - eyona idumileyo
Inkqubo yeCAT S62 -Ikhamera yeFLIR ebhodini
IKyocera DuraForce Ultra 5G -I-5G, ukutshaja ngaphandle kwamacingo, Inkqubo yokuTshintsha okuPhambili
IBlackview BL6000 Pro -I-barometer, uxinzelelo lomoya, ikhamera ephezulu yeSony
Doogee S96 Pro -ikhamera yokwenyani yombono ebusuku
I-Unihertz Atom XL - icwecwe, yomelele, i-DMR walkie-talkie
I-Sonim XP8 - ihlala ixesha elide, iwaranti yeminyaka emi-3
I-CAT S42 - efikelelekayo, ethembekileyo
I-Samsung Galaxy XCover Pro
Iiphikseli ezingama-2340 x 1080
I-25 MP (Ikhamera ezimbini)
I-13 MP ngaphambili
Isamsung i-Exynos 9611
Isamsung enye ye-UI
Jonga ii-specs ezipheleleyo
Ii-specs azikho kwaye azikho shabby nokuba, yi-octa-core Exynos chip ebhangqwe nge-4/64 RAM-combo yokugcina kunye nebhetri efanelekileyo. Ngokuqinisekileyo, xa kuthelekiswa nezinye iifowuni ngelo xabiso azinakulunga, kodwa iifowuni ezingqindilili azaziwa ngokubalaseleyo. Xa kuthelekiswa nezinye izixhobo ezilapha, ezo zisisiqhelo esihle.
Inkqubo yeCAT S62
Iipikseli ezingama-2160 x 1080
I-12 MP (Ikhamera ezimbini)
Ngaphambili kwe-8 MP
IQualcomm Snapdragon 660
Jonga ii-specs ezipheleleyo ze- $ 599 kwi-Amazon $ 650 kwi-eBay $ 600 kwi-TheHomeDepot $ 650 kwi-BestBuy $ 795 kwi-Newegg CAT hasn & apos; azinikezelwanga kwiifowuni ezirhabaxa kwaye zigcina zikhupha iimodeli ezintsha zeefowuni ezomeleleyo. I-CAT S62 Pro ingaphezulu kwefowuni eqhelekileyo kukhuseleko olukhuselekileyo. Inezinye izinto ezongezelelekileyo njengekhamera eshushu, abanye abantu abanokuyifumana iluncedo ngelixa usemsebenzini. Kodwa nokuba awunayo i-apos, awunayo isidingo sinye, iapos yakho iseyinto entle ecocekileyo ekufuneka unayo. Ngelishwa, i-S62 yehla amanqaku aliqela i-S61 yayifana nesixhobo sokulinganisa i-laser kunye nomgangatho womoya womoya.
Ngokungafaniyo neefowuni ezininzi kolu luhlu, i-CAT S62 Pro iza ne-Android 10 kwaye iya kufumana i-Android 11 ngaxa lithile. Ukuba ukhathalele izinto zesoftware kwaye ayizinzisi ngokugqithileyo, yile fowuni ekufuneka uyifumene.
IKyocera DuraForce Ultra 5G
IKyocera DuraForce Ultra
I-MP ye-24 (ikhamera kathathu)
IQualcomm Snapdragon 765G
Jonga ii-specs ezizeleyo Iifowuni zexesha eliphezulu ezirhabaxa ziqale ukufumana uqhagamshelo lwe-5G kunye ne-DuraForce Ultra 5G iphakathi kweyokuqala. Ikwazisa ukutshaja ngaphandle kwamacingo, ekunqabile ukubonwa kwezi fowuni zikhuselekileyo. Inokhuselo olubalaseleyo lwe-ingress kunye nekhaka lesafire ukukhusela isixhobo kwithontsi elingaphezulu kwesinye. Imo yeglove kunye nemowudi emanzi iyanceda ukuba isebenze phantsi kweemeko zoxinzelelo lomsebenzi wosuku lobungcali kwaye unewaranti yeminyaka emi-2 ngenkqubo yokuTshintsha okuPhambili yoxolo lwengqondo.
Ayizenzi imidlalo enomdla njengekhamera yeFLIR, kodwa ikhamera iyakwazi ukudubula imifanekiso okanye ividiyo kwimo engaphantsi kwamanzi.
IBlackview BL6000 Pro
-Ikhamera ephezulu, i-barometer, uxinzelelo lomoya
Thenga kwiAmazonOlunye ungeno olutsha ngokudityaniswa kwe5G. IBlackview iye yagxila kwii-smartphones ezingagungqiyo ukusukela oko yaqalwa, kwaye iBL6000 Pro yeyona nto iphambili kuyo ekujolise kuyo-kwiingcali.
I-Blackview yaziwa ngokugxininisa kwiimvakalelo zekhamera. Ikhamera ephambili kwi-BL6000 Pro ine-sensor ye-48 MP ye-Sony ngemowudi engaphantsi kwamanzi yeefoto kunye neevidiyo. Ifowuni ikwaxhotyiswe nge-barometer kunye nezivamvo zoxinzelelo lomoya ukuze zifundwe endle. Inesithethi esinye kuphela, kodwa iBlackview ithi igxininise kwimpendulo ephindaphindayo yesandi kunye nengxolo ukudala ubunzulu.
-ikhamera yokwenyani yombono ebusuku
Thenga kwiAmazonI-Doogee S96 Pro inendawo yokuthengisa enomdla. Ngaphandle kokukhuseleka kakhulu kuvavanyo lwemo engqongileyo, iyimidlalo yekhamera yombono ye-20 MP ebusuku. Hayi, ayisiyo khamera iqhelekileyo enokubhenceka ngaphezulu. Ngokwenyani isebenzisa iiprojektha ze-infrared kunye ne-20 MP ye-ultra-light sensor ukubamba imifanekiso ukuya kuthi ga kwi-20 yemitha kuluhlu olupheleleyo ebumnyameni. Ngaphandle kwalonto, eyona mvakalelo iphambili yefowuni yiyunithi eyenziwe yi-Samsung MP engama-48.
Ifowuni iza nebhetri ye-6,350 mAh kwaye ixhasa ukutshaja ngaphandle kwamacingo kwe-10 W.
I-Unihertz Atom XL
- icwecwe, inqaku le-walkie-talkie
Thenga kwiAmazonSiyazi i-Unihertz ekwenzeni iifowuni ezincinci ezongezelelweyo zembalasane yanamhlanje. Kodwa ikwanazo neefowuni ezirhabaxa ezimbalwa ezandleni. I-Atom XL isacwecwe ngokufanelekileyo, ngaphandle kwegama layo, kwaye iza ne-eriyali efumanekayo yenqaku le-DMR walkie-talkie. Ke, nokuba uphume kuluhlu lweefowuni zeselfowuni, unokuhlala unxibelelana neqela.
I-apos ayisiyonto iyenzayo, kodwa ibhetri yayo engama-4,300 mAh iya kuqinisekisa ukuba awuphelelwa yijusi nanini na.
Iiphikseli ze-1920 x 1080
I-12 MP (Ikhamera enye)
IQualcomm Snapdragon 630
I-Android 7.0 Nougat
Jonga ii-specs ezipheleleyo ze- $ 320 kwi-Amazon $ 800 kwi-eBay $ 1135 kwi-Newegg I-Sonim XP8 yenye yefowuni enzima. Ngapha koko, umenzi wayo uqinisekile ukuthembakala kweXX8 kangangokuba ayinike newaranti yeminyaka emi-3. Ifowuni kunye ne-apos; Isibonisi esisi-intshi ezintlanu sinokumelana nokugqabhuka, ngelixa umzimba ongqindilili, ombhoxo ungamelana nokuhla kakhulu. Njengenye yeefowuni ezimbalwa kakhulu ezinezatifikethi ze-IP69, i-Sonim XP8 ayinakumelana nokuntywiliselwa emanzini kuphela kodwa ikwatshizwa ngejethi zamanzi ezinobushushu obuphezulu. Inebhetri eya kukuhlala iintsuku, kodwa kukho ingxaki enye kuyo. Yimodeli yakudala kakhulu. I-chip yakudala kunye nohlobo lwe-Android azikho iresiphi yokusebenza kakuhle. Isizathu sokuba sibe nayo kuluhlu lwethu kukuba yenye yeefowuni ezirhabaxa onokuzifumana kumphathi omkhulu.
Iipikseli ezingama-1440 x 720
I-13 MP (Ikhamera enye)
5 MP ngaphambili
ImediaTek Helio A20
Jonga ii-specs ezipheleleyo ze- $ 228 kwi-Amazon $ 499 kwi-eBay $ 313 kwi-TheHomeDepot $ 326 kwi-Newegg Ukuba iifowuni ze-CAT eziphezulu zibiza kakhulu kuwe, unokufumana enye inzima kangangesiqingatha sexabiso. Ewe kunjalo, kukho ezinye iingxaki, njenge-3GB ye-RAM kunye ne-32GB yokugcina, kodwa kuhlala kukho ukungalunganga ngeefowuni ezingabizi kakhulu. Ubuncinci xa kuziwa kuzinzo, unokuqiniseka ukuba ufumana ii-fowuni ezinzima phaya. Yintoni iapos nokuba ingcono, ungayifumana kwiAmazon yaseMelika, ngokungafaniyo nomzala wayo obiza kakhulu.
Yeyona iphone 12 isebenzayo
IiVenkile zeApple zisondele kwakhona, njengoko abaphangi be-iPhone befumana esi silumkiso sokulandela umkhondo
Abathengi beVerizon banokufumana iithowuni ezizodwa kunye neethowuni ezibuyayo ezixhaswe yiSlacker Radio
I-Apple inokusebenzisa ii-AirPods ukulandelela idatha yezempilo